Raggii Paco waxay la soo noqdeen riyooyin cusub | Bezzia
Susana godoy | 04/05/2021 14:00 | Wararka
'Ragga Paco' waxay ka mid ahaayeen silsiladahaas ilaa maanta madaxeena ka laalaada. Waxay ahayd sanadkii 2005 markii aan aragnay markii ugu horeysay seddex boolis ah oo nolol kala duwan leh laakiin saaxiibo ah sanado. Waxyaabihiisii ​​u xiisaha badnaa, qoyskiisa iyo jacaylkiisa ama qalbi jabka ayaa goor dhow nagu xidhi doona shaashadda yar.
Marka shan sano kadib, sida wax kasta oo nolosha ka mid ah, dhammaad bay ku dhowdahay. Dhammaad had iyo jeer naga tagay inaan wax badan dooneyno, in kasta oo xaqiiqda ah in jilayaal badan ay soo mareen taxanaha. Hagaag hadda wuxuu la soo laabtay ruux cusub oo aan awoodi doonno inaan si dhakhso leh ugu aragno Antena 3!
1 Guusha weyn ee 'Los Hombres de Paco'
2 Immisa xilli iyo dhacdooyin ayuu 'Los Hombres de Paco' leeyahay?
3 Muusig cusub oo loogu talagalay taxanaha Antena 3
4 Halkeen ka arki karnaa 'Los Hombres de Paco'?
Guusha weyn ee 'Los Hombres de Paco'
In kasta oo mararka qaarkood ay ku dhacdo taxaneyaasha oo dhan, haddana had iyo jeer ma aha in mid kasta oo ka mid ah xilliyadiisu yeeshaan isku guul. Sidaa awgeed, markii qaar ka mid ah astaamaheeda ay ka baxaan, laga yaabee hoos u dhaca daawadayaasha inay noqon karaan kuwo aad u yaab badan. Laakiin runtu waxay tahay markii 'ragga Paco' gaareen telefishanka waxay arkeen sida waxaas oo dhami isu beddeleen. Waxay haysteen wax kasta oo aan dooneynay waxayna ahayd kaftan wanaagsan, daqiiqado shucuur iyo jacayl, dhammaantood waxay ku xirnaayeen nooca baaritaanka.. Markii xilliyadii la soo dhaafay, jilayaasha cusub ayaa sidoo kale ku darsaday qorshooyinkii jiray waxayna ahaadeen kuwa ugu muhiimsan, sheekooyin cusub oo jacayl iyo hinaase leh Wax ka dhigaya danta guud mar labaad in la dareemo. Waxaas oo dhan iyo in ka badanba, silsiladdu waxay ilaalinaysay dhagaystayaal wanaagsan taageerayaasheeduna way u ooyi jireen xilli cusub.
Immisa xilli iyo dhacdooyin ayuu 'Los Hombres de Paco' leeyahay?
Taxanaha, illaa hadda, wuxuu leeyahay wadar ahaan 9 xilli oo kulligoodna waxay ku daraan in ka badan 117 qaybood. Maaddaama xilli kasta oo dhami aysan isku mid ahayn dhacdooyin isku mid ah. Qaarkood waxay nagu farxeen 14 sida xaalku ahaa xilli ciyaareedkii labaad, halka tan ugu badan ay tahay inay haysteen 12 ama 13. Waxay ahayd bartamaha masiibo iyo xabsi, Abriil 2020 markii la hadal hayay suuragalnimada soo noqoshada. Filim duubista ayaa la filayay inay bilaabanto xagaagaas hadii ay suurta gal tahay. Paco Tous wuxuu ka dhawaajiyay sida mid ka mid ah astaamihii ugu horreeyay ee ku dhex jira. Laakiin wax yar ka dib, magacyada ugu caansan ayaa la siiyay si loo sameeyo koox mar wada guuleysatay. Xaqiiqdii, xagaaga 2020, Michelle Jenner iyo Hugo Silva ayaa sidoo kale xaqiijin lahaa muuqaalkooda xilli ciyaareedka cusub.
Muusig cusub oo loogu talagalay taxanaha Antena 3
Waxaan lahadalnay in jilaayaashu ay umuuqdaan kuwo la ilaalinayo, sidaa darteed waxaan markale arki doonaa halyeeyada waa weyn iyo kooxda ugu macquulsan bileyska oo dhan, oo uu kujiro gudoomiyaha. Laakiin haddii ay jiraan wax isbeddelaya, waa dhawaaqeeda. Hadda waxaa la joogaa xilligii Estopa, ee mas'uulka ka ah soo bandhigida 'El Madero'. Waa heesta cusub ee bilaabi doonta xilli ciyaareedka cusub ee 'Los Hombres de Paco'. In kasta oo aad xaqiiqdii xasuusato kooxda Pignoise, haddana waa Estopa kan la wareegi doona si loogu daro laxanka taxanaha guuleysta.
Halkeen ka arki karnaa 'Los Hombres de Paco'?
Waxay u muuqataa in 16-ka cutub ee cusub loo kala qaybin doono laba xilli. Laakiin marka hore, Waxaa la filayaa in lagu soo bandhigo Antena 3, jadwalka Prime Time ka dibna sii wad in laga daawado iyada oo loo marayo Atresplayer Premium. Tani waa waxa ku dhacay taxane taxane ah oo goor dambe, waxaan awoodnay inaan si furan u aragno. Wixii la filayo inay ku dhacaan isla 'Los Hombres de Paco'. Maaddaama qof kastaa uusan lahayn barnaamijkan laakiin waxay rabaan inay mar labaad arkaan kooxda, iyagoo u dagaallamaya wanaagga iyo xusuusta jacaylkii hore. Ma rabtaa in hadda la sii daayo?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Wararka » Soo noqoshada 'Los Hombres de Paco' ayaa ku sii dhowaanaysa!